Bokin'i Baroka - Wikipedia
Ny Bokin'i Baroka dia boky ao amin'ny Testamenta Talohan'ny Baiboly katolika sy ny Baiboly ortodoksa. Misy faminaniana navoaka tao Babilona ny ao amin'io boky io izay ahitana fahaiza-mandaha-teny. Ahitana fandinihana ny amin'ny teolojia sy ny tantaran'i Isiraely, ady hevitra momba ny fahendrena, sady teny nampitaina tamin'ireo mponin'i Jerosalema sy ireo any am-pielezana. Ahitana fieken-keloka sy fampanantenam-pahafahana ho an'ireo mifona noho ny fahotany ary vavaka fifonana amin'Andriamanitra sy fiderana azy ny ao amin'io boky io. Avy eo ilay boky dia midera ny fahendrena sy ny didin'Andriamanitra, ary miantso ireo Jiosy any am-pahababoana mba hahery sy hionona. Ahitana taratasy lazaina hoe nalefan'i Jeremia ho an'ireo Jiosy natao sesitany any Babilona izay taratasy fampitandremana amin'ny fanompoan-tsampy koa ny ao amin'io boky io.
Boky deoterokanonika ho an'ny Katolika sy ny Ortodoksa ny Bokin'i Baroka sady tsy hita ao amin'ny Tanakh (Baiboly jiosy) sy ny Baiboly protestanta izay manakilasy azy ho apokrifa.
1 Ny anaran'ilay boky
Ny anaran'ilay bokyModifier
Ny fanoratana ilay bokyModifier
Ny lovantsofina dia manao an'i Baroka ho nanoratra ny Bokin'i Baroka. Voalaza fa zanak'i Neria izay Israelita tao amin'ny fokon'i Jodà izy, mpianatra sy mpanoratra sady namana mpanaraka an'i Jeremia. Ny anarany amin'ny teny hebreo dia ברוך בן נריה / Bārūḵ ben Nêrîyāh ("Baroka zanak'i Neria"). Ny hoe Bārūḵ dia midika hoe "voatahy" ary ny hoe Nêrîyāh dia midika hoe "Jiroko i Yah" (izany hoe i Yahweh). Atao hoe Βαρούχ / Baroukh izy amin'ny soratra grika. Nitory teny i Baroka tokony tamin'ny taona 606 tal. J.K.
Nentina niaraka amin'i Jeremia tany Tafnesy any Egipta i Baroka taorian'ny namonoana ny governora Godoliasa izay notendrena ho mpanapaka taorian'ny nahababoan'i Nabokôdônôzôra (na Nebokadnezara) an'i Jerosalema tamin'ny taona 586 tal. J.K. Taorian'ny nahafatesan'i Jeremia dia nankany amin'ireo Jiosy babo tany Babilona i Baroka. Tany no namoahany ireo faminaniany tao amin'io boky mitondra ny anarany io izay.
Fieken-keloka (1.1 -- 3.8)Modifier
Vavaka fiderana an'Andriamanitra (3.9 -- 5.9)Modifier
Taratasin'i Jeremia (6.1 -- 6.72)Modifier
Boky deoterokanonika hafa:
Boky hafa amin'ny anaran'i Baroka
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27i_Baroka&oldid=976793"
Dernière modification le 11 Novambra 2019, à 16:32
Voaova farany tamin'ny 11 Novambra 2019 amin'ny 16:32 ity pejy ity.